UMeizu ufuna ukuba yinkampani yokuqala yokumilisela umnxeba nge-Snapdragon 8150 | I-Androidsis
UMeizu ufuna ukuba yinkampani yokuqala yokumilisela umnxeba nge-Snapdragon 8150
UAron Rivas | | Meizu, Izaziso
Amanye amarhe athi IMeizu iya kuba luphawu lokuqala lokuvula i-terminal nge-Snapdragon 8150, kwaye izakuba ngoDisemba walo nyaka.
Inkqubo entsha yokusebenza okuphezulu iya kukhuphisana ngokuthe ngqo Kirin 980, ene-NPU ezimbini kunye nenkxaso ye5G; ngokuchasene neApple A12, esekwe kwi7 nm; kwaye i I-Samsung's Exynos 9820, esekwe kwinkqubo ye-8nm.
Namhlanje umsebenzisi odumileyo weWeibo uthumele loo nto Ifowuni kaMeizu ilungele ukuqala nge-chip yeQualcomm's 8150 chip. Isixhobo esitsha seflegi yenkampani siza kubonisa uyilo olufana nolo lwe- Meizu 16.
Akuyi kubakho lutshintsho lubalulekileyo kuyilo lwefowuni, xa kuthelekiswa neMeizu 16. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba kunokuthatha indlela eyahlukileyo yokubonakala kunye neenkcukacha ezongezelelweyo kunye nesitayile.
Ukuba ingxelo entsha iyakholelwa, emva koko Iselfowuni eyonwabisayo kaMeizu iya kuba ngumtsalane phakathi kwabathengi, kwaye iya kubanceda bafumane ukuthengisa okuhle kwinkampani. Okwangoku, zininzi izinto ezingekhoyo malunga nokubizwa ngokuba yi-Snapdragon 855, kodwa kufuneka silinde enye inyanga ngaphambi kokuba siyithelekise nabo sikhuphisana nabo.
Ngokwamahemuhemu, I-Qualcomm's Snapdragon 8150 iya kuba neqela eline-CPU ezintathus, kunye neqela eliphambili lenziwe ngokufanayo kwiKirin 980 kunye ne-Exynos 9820. Ukongeza, kuya kubakho ii-cores ezimbini ezinkulu kunye nezinye ezincinci kwaye ziya kuza ne-modem ye-Snapdragon X24 4G LTE (2 GBps). Nangona kunjalo, kukho amarhe akhomba kubuchule be5G.
Nangona kunjalo, isekhona imibuzo emininzi engaphendulwanga kwiwebhu malunga ne-Snapdragon 855. Kuya kufuneka silinde ixesha elincinci ukuqala kwaseburhulumenteni nakwisiphi na isixhobo esiphathwayo, esiya kuba ukuphela kwalo nyaka okanye, ukusilela oko, ekuqaleni konyaka olandelayo. Nokuba kunjani, kusondele kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Meizu » UMeizu ufuna ukuba yinkampani yokuqala yokumilisela umnxeba nge-Snapdragon 8150
Ungamvimba njani umntu kwi-Instagram